Iindaba -Ikamva leWelding ezenzekelayo
Yindlela yokwakha iipayipi ezikrelekrele zexesha elizayo ukusebenzisa oomatshini abazenzekelayo abasebenza ngombhobho. Imeko ebanzi yokufunwa kwayo yonke into-umatshini wokuhambisa umbhobho ngokuzenzekelayo ucacile. Ukufakelwa kombhobho ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo kuqinisekisa ulawulo oluzinzileyo lwenkqubo ye-welding, ukhuseleko olusebenzayo lwe-arc kunye nephuli etyhidiweyo, iqinisekisa ubungqongqo bempembelelo ye-weld, kwaye iqinisekisa umgangatho we-welding. Ingxaki yebhotile ethintela ukusebenza kwe-semi-automatic welding flow operation iphuculwe, kwaye ukusebenza kakuhle kuphuculwe. Zonke-indawo imibhobho oluzenzekelayo ukuwelda kuthetha ukuba umbhobho uzinzile, kwaye intloko welding oluzenzekelayo iyajikeleza ngeenxa umbhobho ukuze uqonde zonke-indawo imibhobho ukuwelda, nkqo ukuwelda, kunye nokuwelda kwentloko. Yonke inkqubo yokuwelda igqityiwe ngumatshini osebenza ngetsimbi osebenza kwibhodi elawula izinto ezikude, engachaphazeleki kangako ngabantu kwaye engaxhomekekanga kakhulu kumatshini wesinyithi. Ke ngoko, umbhobho wonke-isikhundla somatshini wokuhambisa umbhobho ngokuzenzekelayo unenzuzo yomgangatho olungileyo we-welding seam, ukusebenza kakuhle kwe-welding, kunye nokulunga komgangatho we-welding.
Ngokuphuhliswa kwetekhnoloji kunye nokwaziswa, ukwakhiwa kwemibhobho ngokuthe ngcembe kusingisa kwidijithali, kulwazi, kubukrelekrele, nakwimpumelelo. Iiprojekthi eziza kuqalwa kwikamva ziya kwamkela itekhnoloji ezenzekelayo yokufaka iwelding kwinqanaba elikhulu. Kwixa elizayo, i-X90, i-X100 kunye nemibhobho ephezulu kakhulu, imibhobho enobubanzi obuyi-1422 mm kunye neidayimitha ezinkulu nangakumbi, iyakwamkela ubuchwepheshe be-welding oluzenzekelayo kwizinga elikhulu.
HW-ZD-200 series izixhobo ukuwelda oluzenzekelayo i yonke indawo-indawo oluzenzekelayo umbhobho ukuwelda umatshini ngokuzimeleyo eziveliswe Tianjin Yixin Inkampani. Yeyona nto ingundoqo yenzululwazi nethekhinoloji yeNkampani yeYixin. Inokuphucula kakhulu ukusebenza kwemveliso yokwakha kunye nokukhuthaza ngokufanelekileyo ishishini lokwakha lobunjineli. Shift ukusuka kwisiphelo esisezantsi ukuya esiphelweni esiphezulu. Ngokuzenzekelayo ngokupheleleyo ukuwelda kwemibhobho ngengqondo yokwenyani kuqinisekisa ulawulo oluzinzileyo lwenkqubo ye-welding, ukhuseleko olusebenzayo lwe-arc kunye nephuli etyhidiweyo, iqinisekisa ubungqongqo bempembelelo ye-weld, iqinisekisa umgangatho we-welding, isombulula ingxaki ye-bottleneck ethintela i-welding semi-automatic. ukusebenza kolwakhiwo lokuhamba, kwaye kuphucula Ukuphucula ukusebenza komsebenzi.